ခွေးရူးပြန် ကာကွယ်ဆေး နဲ့ပတ်သက်လို့ မေးချင်နေလောက်မယ့် မေးခွန်းအချို့ : ဘာအတွက်အသုံးပြုရတာလဲ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဘာတွေရှိလဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေရောသောက်လို့ရလား။ Hello Sayarwon
ဟာ….. ခွေးကိုက်သွားပြီ ကာာကွယ်ဆေး ထိုးနော်။ ကာကွယ်ဆေး ထိုးလိုက်တာ ကောင်းပါတယ်ဆိုတာပဲ ​ကြားနေရတယ်နော်။ ဘာကြောင့် ထိုးသင့်တယ်။ ကာကွယ်ဆေးကို ဘယ်လို ထုတ်ထားတာပေါ့လို့တော့ ဘယ်သူမှ သေချာ မရှင်းပြ ဖြစ်ကြပါဘူး။
ဒီတော့ ခွေးရူးပြန် ကာကွယ်ဆေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ သိချင်နေလောက်မယ့် အချက်လေးတွေကို ဒီ ဆောင်းပါးလေး ကနေတဆင့် ဖြေပေးသွားပါမယ်။
ခွေးရူးပြန် ကာကွယ်ဆေးဆိုတာ ………
ခွေးရူးပြန် ကာကွယ်ဆေးဆိုတာ လူတွေကို ခွေးရူးပြန် ရောဂါကနေ ကာကွယ်ပေးမယ့် ဆေးပါ။
ခွေးရူးပြန် ကာကွယ်ဆေးကို ခွေးရူးပြန်ဗိုင်းရပ်စ် အသေတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာပါ။ ဗိုင်းရပ်စ်တွေက သေဆုံးနေပြီဖြစ်တာကြောင့် ရောဂါပိုး ကူးစက်စေမှာ မဟုတ်လဲ ရောဂါပိုးတွေကို ကာကွယ်ပေးဖို့ အထောက်အကူပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ခွေးရူးပြန် ကာကွယ်ဆေးက ဘယ်နှကြိမ် ထိုးရမှာလဲ………..
ခွေး၊ ကြောင် ဒါမှမဟုတ် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် တစ်ကောင်ကောင် ကိုက်ခံရပြီ၊ ကုတ်ခံရပြီဆိုတာနဲ့ ချက်ချင်း မြန်နိုင်သမျှ မြန်မြန် ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ လိုပါမယ်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့အခါ အရင်ဆုံး မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး ထိုးပါမယ်။ ပြီးရင်တော့ ခွေးရူးပြန် ကာကွယ်ဆေး ပထမ တစ်ကြိမ်ကို ထိုးရပါမယ်။ အဆိပ်ဖြေဆေးနဲ့ အတူတူပေါ့။
၇ ရက်အကြာမှာ ဒုတိယ တစ်ကြိမ်နဲ့ ပထမဆုံး ဆေးထိုးရက်ကနေ ၂၁ ရက် ဒါမှမဟုတ် ၂၈ ရက်အတွင်းမှာ တတိယ အကြိမ် ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံရပါမယ်။ ၃ ကြိမ်ထိုးပြီးပြီဆိုရင်တာ့ ခွေးရူးပြန်ရောဂါကို အထိရောက်ဆုံး ကာကွယ်လိုက်နိုင်ပါပြီ။
(ဆေးအမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပြီး ၃ခါ ဒါမှမဟုတ် ၄ခါ ထိုးရတတ်ပါတယ်။)
ခွေးရူးပြန် ကာကွယ်ဆေးက တစ်ခါ ထိုးထားရင် တစ်သက်လုံး လုံလောက်လား………
ခွေးရူးပြန် ကာကွယ်ဆေးက တစ်ခါ ထိုးထားရုံနဲ့ တစ်သက်တာ မလုံလောက်ပါဘူး။ အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခု အထိပဲ ကာကွယ်ပေးနိုင်တာပါ။ ဒါကြောင့် ခွေးရူးရောဂါပိုး ရှိနိုင်တယ်လို့ ယူဆရတဲ့ လူ ဒါမှမဟုတ် တိရစ္ဆာန် ကိုက်တာ၊ ကုတ်တာ ခံရတိုင်း ကာကွယ်ဆေး ထိုးပေးဖို့ လိုပါမယ်။
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် ကိုက်ခံရရင်ရော ကာကွယ်ဆေး ထိုးဖို့လိုလား……….
ကိုယ့်အချစ်တော် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆိုတာနဲ့ ခွေးရူးရောဂါပိုး မရှိဘူးလို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်ပဲ ကိုက်ကိုက်၊ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်၊ အခြားသူတွေရဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေပဲ ကိုက်ကိုက် ဆေးကို ချက်ချင်း ထိုးပါလို့ ပြောပါရစေ။
အကိုက်ခံရမှ ကာကွယ်ဆေး ထိုးရမှာလား……….
တိရစ္ဆာန် အကိုက်ခံရမှ ကာကွယ်ဆေး ထိုးရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အကုတ်ခံရတာ၊ အနာကို လျှာနဲ့ လျှက်လိုက်တဲ့ အခါမျိုးမှာလည်း ကာကွယ်ဆေး ထိုးဖို့ လိုပါမယ်။
ဘယ်တိရစ္ဆာန်တွေမှာ ခွေးရူးပြန်ပိုး အများဆုံး သယ်ဆောင်ထားတာလဲ………
တိရစ္ဆာန်တွေထဲကမှ တောရိုင်း တိရစ္ဆာန်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ရက်ကွန်းဝံ၊ လင်းနို့၊ နံစော်ဖျံ၊ မြေခွေး၊ ကြောင်၊ ခွေး၊ ကျွဲနွား စတဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေပါ။
ခွေးရူးပြန်ပိုး မရှိတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေက ဘာတွေလဲ…….
နို့တိုက် သတ္တဝါမဟုတ်တဲ့ ငှက်၊ ငါး၊ မြွေ၊ ဖား၊ ကြက်၊ ဘဲ တို့မှာတော့ ခွေးရူးရောဂါပိုး တွေ့ရလေ့ မရှိပါဘူး။
How to TreataDog Bite https://www.healthline.com/health/dog-bite-treatment Accessed Date3September 2020